Ra'isul wasaare Geeddi oo maanta aadaya Baydhabo, madaxweyne Musavini oo markale isku dayaya in uu baarlamaanka ka ansixiyo ciidamo la geeyo Soomaaliya iyo Afguduud oo madaxweyne Yuusuf ku eedeeyay dhimashadii maleeshiayadii reer Puntland ee lagu laayay dagaalkii degaanka Diinsoor. Ruunkinet 12/12/06
Ra'isul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cali Geeddi ayaa la filayaa in uu maanta aado magaalada Baydhabo ee xarunta u ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Ra'isul wasaaare Geeddi oo dhawaan ka soo laabtay dalka Nijeeriya ayaa la sheegay in uu u ol oleeynayay keenidda ciidamo shisheeye ee hunka ka dhiga maleeshiyada maxaakiimta ka talisa inta badan koonfurta Soomaaliya.
Sidoo kale, madaweynaha dalka Uganda mudane Musafeni ayaa la sheegay in uu markale geenaya golaha baarlamaanka dalkiisa motion uu ku doonayo in mudanayaasha baarlamaanka aqbalaan in Soomaaliya loo diro ciidama ka tirsan Ungada in kastoo ay horay u diideen in ay ansixiyaan motion uu horay u keenay madaxweynaha.
Dhinaka kale, wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in sarkaalka lagu magacaabo Afguduud oo hoggaaminayay maleeshiyadii laga keenay Puntland ee ku sugnaa magaalada Baydhaho lagu eedeeyay dhibaatadii ka dhacday degaanka Diinsoor dhawaan.
Arrintan ayaa ka dambeysay kagadaal markii Afguduud uu ciidamo ka yimid Puntland oo uu asaga horkacayay lagu laayay degaalkaasi ayadoo warar kalane ay sheegayaan in nolol lagu qabtay qaar kale oo ka tirsan maleeshiyaadaasi
Maleeshiyada dagaalkaasi looga xoog roonaaday ayaa la sheegay in ay u badnaayeen kuwo ay iku heyb yihiin madaxweynaha Soomaaliya mudane Cabdullahi Yuusuf Axmed.
Mudane Afguduud ayaa la sheegay in uu dagaalkaasi aaday asagoo aan amar ka qaadan mas'uuliyiinta dowladda federaalka ah ee ku sugan magaalada Baydhabo.
Cabdullahi Xuseen, Ruunkinet, London.